प्रदेश नं २ : काँग्रेस , माओवादी र जसपा ( उपेन्द्र ) बीच मन्त्रालय बाँडफाँड , कसलाई कुन मन्त्रालय पर्यो ? - Dainik Online Dainik Online
प्रदेश नं २ : काँग्रेस , माओवादी र जसपा ( उपेन्द्र ) बीच मन्त्रालय बाँडफाँड , कसलाई कुन मन्त्रालय पर्यो ?
सहमति अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दिन चार वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १० वटा पु¥याउने तयारी छ । जसपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवका अनुसार सामाजिक विकासलाई टुक्र्याएर नयाँ मन्त्रालयका रुपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य बनाइनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सञ्चार झिकेर नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि तथा सहकारीलाई अलग गर्ने र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणबाट वन तथा वातावरणलाई अलग गरेर ४ वटा मन्त्रालय थप्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।